Moe Kai: Google Plus ကို မုန်းတယ်
ကျမရဲ. အလုပ်အတွက် အသုံး အများဆုံး Email က gmail နဲ.ပါ။ အလုပ်က အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတော့ email တွေလဲ မျိုးစုံ ပြောင်းပြီး နောက်ဆုံး ဒီ gmail ကိုပဲ ပြန်ပြန်ရောက်လို.လာပါတယ်။ ကျမလိုအပ်တာကလဲ အမြဲ အလွယ်တကူ သုံးလိုရတာ၊ ဖုန်းနဲ. သုံးလို.ရတာ၊ တခြား နိုင်ငံရောက်နေလဲ အလွယ်တကူ ဝင်သုံးလို.ရတာ ဒီ Criteria တွေနဲ. ပြည့်တဲ့ email မျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက အခု Google Plus ဆိုတာကြီး ပေါ်လာပြီးထဲက အဲဒီကနေ. Google နဲ. သက်ဆိုင်တာတွေ အားလုံး စုပြီး Public ထုတ်လွှင့်တော့တာပါပဲ။ ဥပမာ Blogpost Youtube Picassa နဲ. တခြား မြောက်များစွာသော Google Products တွေပေါ့။
တခါတလေ အလုပ်က Gmail သုံးတဲ့ တချို.ဆီက အီးမေးရောက်လာရင် သူတို.ရဲ. Google Plus က ဓါတ်ပုံတွေပါ တွေ.ရတတ်ပါတယ်။ စပ်စုချင်ရင် အဲဒီ ဓါတ်ပုံကို နှိပ်ပြီး ဆက်သွားရင် သူတို.ရဲ. ဝါသနာ မိသားစု အားကစား ဟောလီးဒေးဆိုတာတွေ တောင် ကြည့်လို.ရရင် ရနေသေးတာ။ အထူးသဖြင့် ကျမနဲ. လူချင်း မတွေ.ဖူးပဲ အလုပ်အရပဲ email နဲ. ဖုန်းနဲ. ဆက်သွယ်ရတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ သူတို. ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး အော် ဒီရုပ်တွေပါလား ဒီအသက်အရွယ်ပါလားလို. သိရတာပေါ့။
ကျမမှာလဲ Google Plus account က ရှိတော့ မသုံးဖြစ်ပေမယ့် ကျမလိုပဲ တခြား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလဲ ကျမ ဘာရုပ်လဲ (အထီးလား အမလား) ဆိုတာမျိုး စပ်စုချင်သူ စပ်စုလို.ရကြမှာပေါ့။ ဒါမေမယ့် ကျမ Account က ကျမရဲ. profile ဓါတ်ပုံအပြင် တခြားဘာမှ တင်မထားပါ။ အဲလိုပဲ ထင်ခဲ့မိတာလေ။
တခါမှလဲ ကျမရဲ. ဒီ Google Plus ဆိုတဲ့ Account ကြီး ကို ဝင်မကြည့်မိခဲ့၊ ဒီနေ.မှ ဘာမင်ဂန်က ဆေးကျောင်းသား တယောက် သူတို. Conference လုပ်တာ စာလာသင်ပေးဖို. ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ Google mail ကလာတာ ဆိုတော့ သူ.ရဲ. G Plus ဓါတ်ပုံနဲ. ဘယ်လို ရုပ်မျိုးလဲဆိုတာ တွေ.နေရပါတယ်။ ကျမလဲ သူ. Email ကို ပြန်ပြီးမှ သတိရသွားတာ ဒီကျောင်းသားတွေလဲ ငါ့ပုံဝင်ကြည့်လို. ရနေမှာပဲ ဆိုပြီး ဘာရယ်မဟုတ် ကျမရဲ. Google Plus Account ကို ဝင်ကြည့်မိလိုက်တာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဒင်းက ကျမရဲ. Blog က Post တွေရော Youtube က Favourite လုပ်ထားတာတွေရော ဒီ Blog က ဓါတ်ပုံတွေရော (album တခုနဲ.) Public Display လုပ်ထားတာ တွေ.လိုက်ရပါတယ်။ ဘာ Private information မှ မပါပေမယ့်လဲ ကျမရဲ. Social life နဲ. Professional life နှစ်ခုကို ကျမ သပ်သပ်စီ ခွဲထားချင်ပါတယ်။ Private Life ကိုလဲ private ထားပြီးတော့ပေါ့။
ဥပမာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျမရဲ. လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ ကျမနဲ. အီးမေးဆက်သွယ်မယ်၊ အီးမေးကနေ ဒီ Googleplus ကရောက်လာမယ်၊ ကျမတင်ထားတဲ့ blog post ဒီ post တွေနဲ. ဆက်နွှယ်နေတဲ့ ပုံတွေကြည့်။ တချို.စာတွေက သူတို.အကြောင်း ကျမ အတင်း တုတ်ထားတာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှာပဲ။ ကျမရေးတဲ့ စာတွေ သူတို.နားမလည် ကြောင်းလဲ သိနေပေမယ့်လဲ ကျမတော့ ဘောမကျ .. ။
ဒါနဲ. ရှိရှိသမျှ ရှယ်ထားတာ အားလုံး၊ ဓါတ်ပုံတွေအားလုံး ဖျက်ပြီး ဒီ ဘလော့နဲ. Google Plus ကို ဆက်နွှယ်နေမှု မရှိအောင် လုပ်ထဲလိုက်တာ အလုပ်လွန်ပြီး ဒီဘလော့က ပုံတွေပါ အားလုံး ပျောက်သွားတော့တာပါပဲ။ ဂန်. ဂန်. ဂန်. ....
ကဲ ..... သမ္ဗေ သဒ္ဒါ ကမ္မသက္ကာ ပေါ့ ...
ဒီ ဘလော့လဲ ဖျက်ချင်နေတာ ကြာခဲ့ ပြီပဲလေ။
တခါတလေ ညည်းချင် ငြူချင် စိတ်ပေါ်လာရင် Facebook မှာပဲ Notes ရေးပြီး ညည်းဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ. .... ကွယ် ။
အပြောတွေစော အပြစ်တင်မိတာ ပြန်ပြင်ပါတယ်။ Google Plus, Blogspot forum, Picassa အားလုံး လျှောက်ဖတ်ပြီး သိလိုက်ရတာက ဘလော့ဂ်က ဓါတ်ပုံတွေကို ပီကာစာမှာ တင်ထားတာပါ။ အဲဒီတော့ ပီကာစာက ပုံတွေ ယောင်ပြီး မဖျက်မိပါစေနဲ.။ ကျမရဲ. ပုံတွေကတော့ ကျမ ကလိလွန်သွားလို. အားလုံး Private setting ဖြစ်ပြီး မမြင်ရတော့တာပါ။ အဲဒါကို ပီကာစာမှာ ပြန်သွားပြီး Public ပြန်ပြောင်းလိုက်တော့ အားလုံး အဆင်ပြန်ပြေသွားပါပြီ .... ကွိကွိကွိ